Yusuf Garaad: Axmed - Kismaayo, Soomaali sharfan iskuna kalsoon
Axmed - Kismaayo, Soomaali sharfan iskuna kalsoon
Axmed - Kismaayo 10 cisho hortood, Nairobi
Axmed Maxamed Cali oo loo yiqiin Axmed Kismaayo wuxuu ahaa saaxiib aan muddu dheer soo wada shaqeynay marxalado kala duwanna aan isla soo marnay.
Axmed – Kismaayo oo shaqadii ugu adkeyd, ugu xasaasinayd badneyd isla markaana ugu sannado badneyd ay nagu dhex martay BBC oo uu uga soo warramay goobo kala duwan oo ay ugu badan tahay xarunta Puntland ee Garowe, wuxuu ahaa Soomaali aad u qiimo badan.
Axmed wuxuu ahaa nin aammin ah, run yaqaan ah lana baqin runta.
Wuxuu ahaa nin ahalu diin ah. Wuxuu ahaa nin saaxiib yaqaan ah.
Dhinaca kalena wuxuu ahaa nin sheekoole ah oo aan kaftama. Wuxuu ahaa nin ciyaal magaal ah oo cayaari jiray kubbadda cagta, yaqaan qawaaniinteeda isla markaana xiiseeya.
Axmed – Kismaayo oo aan anigu qoray shaqada BBC, wuxuu ahaa arrimaha lagu muransan yahay ee ka taagan degaanka uu ka soo warramayo nin dib uga degi kara oo ka bixin kara sawir guud oo dheelli tiran.
Axmed – Kismaayo oo aan muddo dheer tifatire u ahaa weligeey inta aan ka shakiyay dib umaan baarin war uu soo diray. Wuxuu ka mid ahaa weriyayaasha warka ay tebiyaan marka ay dacwo ka daba timaaddo, aan aniga oo aan baarin haddana aan kalsooni ku qabi jiray in marka la baaro aan laga heli doonin wax aan xaqiiqo ahayn. Mar kastana sidaas ayay ku sifeysnaayeen wararkiisu.
Waxaa kale oo uu Axmed ahaa nin hal abuur leh wax akhrista, waxna qora.
Wuxuu nin hal adag, siiba marka uu u arko in uu gar ku taagan yahay.
Axmed waxaan ka wada shaqeynay Radio Muqdisho siddeetamaadkii. Waan is weynay markii caasimadda iyo magaalooyin kale oo badan laga qaxay.
Waxaan dib isu helnay 1998 mar aan horseed ka ahaa mashruuc ay BBC tababbar u fidisay weriyayaal Soomaaliyeed. Axmed – Kismaayo waxaan berigaas isku aragnay Hargeysa oo lagu qabtay wejiga koowaad ee tababbarka. Wejiga labaad wuxuu ka dhacay magaalada Marka maaddaama EU oo bixineysay kharashka tababbarku ay diidday in Muqdisho lagu qabto.
1998 Axmed wuxuu Tifatire ka ahaa wargeyska Riyaaq oo ka soo bixi jiray Garowe. Wixii xilligaa ka dambeeyayna Axmed waan iska warqabnay, iyada oo wada shaqeynteennu ay sannadba sannadka ka dambeeya ay sii xoogeysaneysay ilaa aan anigu shaqada ka tegey 2012.
Markii uu dhacay dagaalka sokeeye ee Soomaalidu, Axmed wuxuu ahaa dadka og qiilka reero badina ay leeyihiin iyo qiilka ay is moodsiiyeen in ay leeyihiin.
Axmed - Kismaayo oo xil loo dhaarinayo
Waxaan is iri waxaa taas u suurta gelisay dhalyadiisa iyo xididkiisa oo dhammaantood ahaa beelo kala duwan.
Axmed wuxuu ila qabanqaabiyay heshiis dhex maray BBC iyo idaacadda SBC oo berigaas cusbeyd. ka dibna wuxuu igu soo dhoweeyay Boosaaso iina qabanqaabiyay xafladda ku dhawaaqidda iskaashiga BBC iyo SBC.
2011 oo aniga iyo hooyadeey macaan Allah ha u naxariistee aan soo wada xajinnay, Axmed-Kismaayo wuxuu ka mid ahaa rag mar aan aad u qandhooday igu soo booqday teendho aan degganaa. Allah ajar ha ka siiyo.
Xilalka kale ee uu qabtay waxaa ka mid ahaa Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Puntland. Waxaan u qaatay in uu ku muteystay kartida, mas’uulnimada, caddaalad – yaqaannimada iyo runta aannuu la gabban.
Qormadii Axmed ugu dambeysay, tii ka horreysay
Muddo hadda laga joogo toban maalmood ayaan Axmed si kedis ah isugu aragnay gegida dayaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Waxaan u wada soconnay magaalada Mumbai, India.
Goobtaas ayaan isku soo boodnay. Codku waa uu ka xirnaa laakiin haddana waan is wareysannay. Codka aad u hooseeya ee aan la maqli karin ka sokow, muuqaal ahaan, xoog, tallaabada, qosol iyo socod intaba wuxuu u muuqday nin caafimaad qaba oo xayi ah. Waxaa wehlisay gabar dhakhtarad ah oo ah Hindida Kenya.
Wuxuu soo jeediyay in aan sawir isla galno, taas oo aan ku farxay. Aroortiina marka aan ka degnay Mumbai wuxuu sawirkii soo dhigay bartiisa Facebook.
Markii aan maanta eegay barta Facebook ee Axmed-Kismaayo, si aan sawirkii ugala soo dego, waxaan arkay qormadiisii ugu dambeysay ee uu abid daabacay middii ka horreysay oo sawirro wadata oo uu iigu hambalyeynayo saxiixii heshiiska ay Soomaaliya la gashay India.
Soomaalida Hyderabad markii ay toddobaadkii hore iigu warbixinayeen in bil kasta ay Hyderabad ku dhintaan qof ama laba Soomaali ah, kama aanan warqabin in Soomaaliga ugu horreeya ee ku geeriyoon doonaa uu yahay saaxiibkeey Axmed- Kismaayo.
Ilaahow u naxariiso Axmed Maxamed Cali. Ilaahow Jannada ka waraabi. Ilaahow xaaskiisa, carruurtiisa iyo waalidkiisba Samir iyo Imaan ka sii.
Posted by Yusuf Garaad at 22:48:00
Maxkamad Mumbai oo maanta xukuntay 26 Soomaali ah
Farriinta Taloja: Soomaali yaanay xabsiga nagu ill...
Ardayda Hyderabad - Waddaniyiin dad iyo dal Jecel
Maxaabbiis Soomaali ah oo maanta lagu xukumay Mumb...